इन्धनमा जनतामाथि चर्को करः १ खर्ब ६० अर्बको आयातबाट ५५ अर्ब राजस्व ! « GDP Nepal
इन्धनमा जनतामाथि चर्को करः १ खर्ब ६० अर्बको आयातबाट ५५ अर्ब राजस्व !
Published On : 12 August, 2018 7:56 am
काठमाडौं । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर ५५ अर्ब कर संकलन गरेको छ । नेपाल आयल निगमले आव २०७४/७५ मा अघिल्लो वर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी अर्थात ५५ अर्ब कर तिरेको जनाएको छ ।
इन्धन आयात र करको परिमाणबीच तुलना गर्दा नेपालमा यस क्षेत्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाइएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको लाइफलाइन मानिने र मूल्यवृद्धिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने इन्धनमा यतिधेरै कर लगाउनु उपयुक्त हो कि हैन भनेर छलफल गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
आयल निगमले आव २०७३/७४ मा सरकारलाई ४७ अर्ब राजस्व बुझाएको थियो भने गत आवमा ५५ अर्ब । यसअघि २०७२/७३ मा २३ अर्ब ५४ करोड र आव २०७१/७२ मा २६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको तथ्यांक छ ।
गत वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २६ लाख ६१ हजार ९ सय ८५ किलोलिटर इन्धन आयात गरेको रेकर्ड छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वापत २३ अर्ब रुपैयाँ र आयकर मार्फत २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।
यस्तै, सडकमर्मत दस्तुरवापत ५ अर्ब १० करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । वातावरण प्रदूषण शुल्क वापत १ अर्ब ३२ करोड सय ९७ रुपैयाँ संकलन गरेको निगमले जनाएको छ । यस्तै १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख २० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
यसरी इन्धनमा चर्को कर संकलन गरेर राज्यलाई राजस्व वृद्धिमा सफलता मिले पनि यसले जनताको दैनिकी भने असहज बनाएको छ । उपभोक्ताले विभिन्न शीर्षकमार्फत शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा इन्धन महंगो पर्ने गर्छ ।
निगमले उपभोक्ताबाट इन्धन खरिद गर्दा प्रदूषण शुल्कतर्फ पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५० पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । यस्तै पूर्वाधार कर (बूढीगण्डकी) तर्फ प्रतिलिटर पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) शीर्षकमा ५÷५ रुपैयाँका दरले उपभोक्ताले कर बुझाउँछन् ।
सडक मर्मतसम्भार करतर्फ भने उपभोक्ताले प्रतिलिटर पेट्रोलको खरिदमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा२ रुपैयाँ करबापत सरकारलाई अतिरिक्त कर बुझाउँछन् ।
निगमले जुन शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरे पनि खर्च नभई सरकारको खातामा थुप्रिने गरेको छ । यस्तै निगमले निगम पूर्वाधार विकास कोष, ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, निगमको प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, इन्धन कर, निगमको नाफाघाटा, इन्धन बिक्रेता कम्पनीको खर्च तथा नाफा शीर्षकमा पनि कर असुल्दै आएको छ ।